मेहन्दीको रंगः जति गाढा, स्वास्थ्यका लागि उति हानिकारक :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
मेहन्दीको रंगः जति गाढा, स्वास्थ्यका लागि उति हानिकारक मेहन्दी लगाउदा कस्ता कुरामा ध्यान दिने?
रिता लम्साल सोमबार, साउन ४, २०७८, ०६:१०:००
काठमाडौं– साउन महिना सुरु भएसँगै महिलाहरु हरियो पहिरन लगाउने, सोमबार ब्रत बस्ने र हातमा मेहन्दी लगाउने गर्छन्। सुन्दर फुलबुट्टा भरेर हातमा मेहन्दी लगाउन युवतीहरु पनि उत्साहित भएको पाइन्छ।
उनीहरु हातमा फुलबुट्टा भरेर मेहन्दी लगाएको फोटो तथा भिडियो समाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गरिरहेका छन्। हत्केलामा भरिएको मेहन्दीको डिजाइन र गाढा रंगले झट्ट हेर्दा आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ ।
तर, हेर्दा आकर्षक देखिने मेहन्दी कसरी बनाइन्छ? कस्तो मेहन्दी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
तपाईंले आफैंले प्राकृतिक तरिकाले बनाएको मेहन्दी प्रयोग गर्नु हुन्छ वा बजारमा पाइने केमिकलयुक्त मेहन्दीको प्रयोग गर्नुहुन्छ?
सचेत हुनुपर्ने विषय के छ भने, मेहन्दीमा प्रयोग हुने केमिकलले तपाईंको हत्केलाको छालामा एलर्जी हुनुका साथै लामो समयमसम्म मेहन्दी प्रयोग गर्दा शरीरका भित्री अंगहरुमा समेत असर पर्न सक्छ।
छाला रोग तथा सौन्दर्य विषेशज्ञ डा धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार प्राकृतिक रुपमा बनस्पतीबाट बनाइएको र कृतिम रुपमा बनाइने गरी मेहन्दी दुई किसिमका हुन्छन्।
प्राकृतिक रुपमा बनाइने मेहन्दीमा बनस्पतीबाट निकालिएको रंग हुन्छ। जसलाई ‘पेस्ट’ बनाएर घरमै पाइने ल्वाङ, नरिवलको तेल आदिको मिश्रणबाट बनाइएको हुन्छ। प्राकृतिक रुपमा बनाइने मेहन्दीको रंग रातो र खैरो हुन्छ। पहिला–पहिला गाउँघरमा महिलाहरु प्राकृतिक रुपमा बनाइएको मेहन्दी लगाउथें।
यसरी प्राकृतिक रुपमा बनाइएको मेहन्दीले छाला वा स्वास्थ्यमा खासै असर पर्दैन। प्राकृतिक बनस्पती मार्फत बनाएर लगाएको मेहन्दी हातमा एकसाता वा १० दिनसम्म मात्र बस्न सक्छ।
यस्तै कृतिम मेहन्दी भनेको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको रंग बनाएर प्रयोग गरिने मेहन्दी हो।
कृतिम रुपमा बनाइएको मेहन्दीलाई बजारमा लैजान उत्पादक कम्पनीहरुले प्राकृतिक मेहन्दीकै नाम दिएका हुनसक्छन्। तर, त्यो मेहन्दी प्राकृतिक रुपमा भन्दा पनि केमिकल मिसाएर बनाइएको हुन्छ।
बजार पाइने कृतिम मेहन्दीमा पारा–फेनाइलेनेदायमाइन नामक केमिकल मिसाइएको हुन्छ। जसले मेहन्दीको रंग गाढा बनाइदिन्छ।
यस्तो केमिकल मिसाइएका मेहन्दी लगाउँदा छालाको भित्री भागसम्म पुगेर लामो समयसम्म हातमा रंग बस्न सक्छ।
विकसित देशहरुमा यस्तो केमिकल मिसाइएको मेहन्दीमा कति मात्रामा केमिकल राख्ने भनेर उपयुक्त मात्रा निर्धारण गरिएको हुन्छ।
तर,नेपालमा हातमा लगाउने मेहन्दीमा कति मात्रामा केमिकल प्रयोग गरिएको छ? भनेर परीक्षण गर्ने वा मेहन्दीको गुणस्तर हेर्ने कुनै निकाय छैन। कस्मेटिक सामाग्रीको गुणस्तर जाँच गर्ने निकाय नभएकाले बजारमा पाइने मेहन्दी लगाउँदा स्वास्थ्यमा तत्कालिन र दीर्घकालिन असर पर्न सक्ने डा कर्ण बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अत्याधिक केमिकल मिसाइएको मेहन्दीले तत्कालिन र दीर्घकालिन असरहरु देखिनसक्छ।
केमिकलयुक्त मेहन्दीको तत्कालिन असर
–छालामा एलर्जी हुने,
–सुन्निने तथा फोका उठ्ने,
–घाउ खटिरा आउने,
–पानी तथा पिप आउने ।
डा कर्णका अनुसार यस्तो समस्या मेहन्दी लगाउने वित्तिकै तथा मेहन्दी लगाएपछि एकसाता वा १० दिनसम्ममा पनि देखिन सक्छ। मेहन्दी लगाउँदा केमिकलको असरले हुने एलर्जी सामान्य एलर्जी भन्दा खतरनाक हुने डा कर्णले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘केमिकलयुक्त मेहन्दीको एलर्जीले चिलाउने, घाउ आउने, पानी फोका आउने, घाउ पाक्ने, मेहन्दी लगाएको ठाउँमा दाग बस्ने समस्या देखिन्छ।’
केमिकलयुक्त मेहन्दीको प्रयोगले हुने तत्कालिन असरको समयमै उपचार गर्दा निको हुनसक्छ। तर हेमन्दीको प्रयोगले पार्ने दीर्घकालिन असर अझै खतरनाक हुनसक्छ।
डा कर्णका अनुसार मेहन्दी लामो समयसम्म निरन्तर प्रयोग गरेमा यसले शरीरको भित्री अंगहरुलाई असर पुर्‍याउछ।
केमिकलयुक्त मेहन्दीको निरन्तर प्रयोगले हुने दीर्घकालिन असर
– केमिकलयुक्त मेहन्दी शरीरको छालाबाट शरीरको भित्री अंगमा पुग्छ र त्यो केमिकल मिर्गौलामा पुग्न सक्छ। जसले गर्दा मिर्गौलामा समस्या हुने तथा क्यान्सर हुने जोखिम पनि बढ्छ।
बजारमा केमिकलयुक्त मेहन्दी सहजै रुपमा पाइन्छ। यस्तो मेहन्दी लगाउदा सुन्दर देखिएपनि त्यसको असर नकारात्मक हुन्छ। त्यसैले मेहन्दी लगाउदा सम्भव भएसम्म प्राकृतिक रुपमा बनाएर लगाउन उपयुक्त हुने डा कर्णको तर्क छ।
‘मेहन्दी लगाउदा सम्भव भएसम्म आफैंले प्राकृतिक रुपमा बनाएर लगाएको राम्रो हुन्छ,’ डा कर्णले भने, ‘बजारमा पाइने मेहन्दीमा केमिकल मिसाइएको हुन्छ त्यसले असर पर्छ।
बजारको मेहन्दी जति गाढा उती हानिकारक
महिलाले हातमा लगाउने मेहन्दी जति गाढा भयो त्यति नै बढी माया गर्ने पति पाइने विस्वास राखिन्छ। त्यसैले हरेक महिलाहरु आफ्नो हातमा मेहन्दीको रंग गाढा होस् भन्ने चाहन्छन्।
तर स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्ने हो भने मेहन्दीको रंग तपाईको हातमा जति गाढा बस्छ, त्यो मेहन्दी त्यति नै हानिकारक छ भन्ने संकेत पनि गर्छ।
उपभोक्ताको चाहना पुरा गर्न मेहन्दी उत्पादकहरुले बढी मेमिकल मिसाएर मेहन्दीको रंग गाढा बस्ने बनाएका हुनसक्छन्।
‘मेहन्दीको रंग गाढा भएको होइन, मेहन्दीमा केमिकल मिसाएर गाढा बनाइएको हो, बढी गाढा देखिएका मेहन्दीमा पारा–फेनाइलेनेदायमाइन तथा मट्टितेल तथा पेट्रोलको समेत प्रयोग भएको हुनसक्छ,’ डा कर्णले भने, ‘यस्तो केमिकलले रंग छालाको भित्रसम्म पुग्छ र मेहन्दी गाढा हुन्छ, तर यसले छालालाई असर गर्छ।’
अघिल्लो वर्षको साउनमा पनि केमिकल मिसाइएको मेहन्दी लगाएर छालामा एलर्जीको समस्या लिएर उपचारका लागि समेत महिलाहरु आएको डा कर्णले सुनाए।
‘प्रत्येक वर्ष साउनमा मेहन्दी लगाएर एलर्जीको समस्या भएको भन्दै महिलाहरु उपचार गर्न आउँछन्,’ डा कर्णले भने, ‘उनीहरुमा एलर्जी हुनुको कारण खोज्दै जाँदा बजारबाट किनेर लगाएको मेहन्दीको प्रयोगले एलर्जी भएको थाहा हुन्छ।’
प्राकृतिक रुपमा मेहन्दी बनाउन सम्भव नभएको अवस्थामा बजारकै मेहन्दी लगाउनुपर्ने अवस्थामा पहिला आफुमा त्यो मेहन्दीले एलर्जी गर्छ वा गर्दैन भनेर जाँच गरेर मात्र लगाउन डा कर्णको सुझाव छ।
‘मेहन्दीको एलर्जी छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि मेहन्दीको थोरै मात्रा घाटी, काँखी वा शरीरको कुनै भागमा लगाएर २४ घण्टा राख्ने,’ डा कर्णले भने, ‘ यस्तो गर्दा यदी चिलाएन, पोलेन वा कुनै समस्या देखिएन भने तपाईलाई एलर्जी नहुनसक्छ।’
परीक्षण गरेर गर्दा एलर्जीको समस्या भएमा भने त्यस्तो मेहन्दी लगाउन नहुने डा कर्णको भनाइ छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका ‘महजोडी’को ५५ वर्षे मित्रता
खोप लाएको प्रमाण लिन मध्यरातदेखि लाइनमा, भिडबाटै कोरोना लाग्यो भने सरकारले जिम्मा लिन्छ?